အမေဇုံသည်စာအုပ်ဆိုင်မှငွေရှင်းကောင်တာများကိုဖယ်ရှားပစ်မည်လား။ | eReaders အားလုံး
မနေ့ကမှပဲ Amazon ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုကိုမကြာခင်မှာမြှင့်တင်သွားမှာပါ အစားအစာနှင့်ကော်ဖီဆိုင်များရောင်းချခြင်းပါဝင်သည်။ ဤစက်ရုံများသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်အမေဇုန်၏အလှူငွေဖြစ်သည်။
အမေဇုံညွှန်ပြသည့်အတိုင်း Amazon Go လို့ခေါ်တဲ့စတိုးဆိုင်များမှာငွေရှင်းကောင်တာများမရှိပါဆိုလိုသည်မှာအသုံးပြုသူသည်သူ၏အစားအစာနှင့်အရွက်များကိုယူသည်။ ထို့နောက်အမေဇုံသည်အသုံးပြုသူမှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားမှတစ်ဆင့်ဝယ်ယူမှုအတွက်ငွေတောင်းခံလွှာသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူပြုလုပ်သောအချိုရည်များကိုဖြတ်သန်းလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်များစွာသောလူများအတွက်တော်လှန်ရေးဖြစ်ပြီး၊ များစွာသောသူများအတွက်မဖြစ်နိုင်ပါ။
သို့သော်မေးခွန်းမှာဤမေးခွန်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော် Amazon သည်ဤနည်းပညာကို၎င်း၏စာအုပ်ဆိုင်များနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များတွင်ထည့်သွင်းမည်လားဆိုသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ သို့ဆိုလျှင်အမေဇုန်ကမျှော်လင့်သကဲ့သို့လူအများကမျှော်လင့်နိုင်ကြသည် ငါတို့သိသည့်အတိုင်းကုန်သွယ်ရေးနှင့်စာအုပ်ရောင်းချခြင်းကိုတော်လှန်ပြောင်းလဲခြင်း မည်သည့်အသုံးပြုသူမဆိုတန်းစီရန်သို့မဟုတ်စောင့်ဆိုင်းရန်မလိုသောကြောင့်၎င်းသည် ၀ င်ရောက်ရန်၊ စာအုပ်ယူရန်နှင့်ထွက်ရန်သာဖြစ်သည်။ ရိုးရာစာအုပ်ဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဘူးသောဆန့်ကျင်တစ်ခုခု ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လား?
Amazon Go နှင့် Amazon ၏အသစ်စက်စက် RFID ID ကဒ်များပေါ်တွင်မူတည်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝယ်ယူမှုကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာငွေပေးချေခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည့်ကတ်များ။ ယခုအချိန်တွင်သေးငယ်သည့်စာအုပ်ဆိုင်များအတွက်မရနိုင်သော်လည်းနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းပြောင်းလဲနိုင်သည့်နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းငွေရှင်းကောင်တာများဆက်လက်တည်ရှိတော့မည်မဟုတ်ဘဲ၎င်းတွင်ငွေရှင်းကောင်တာမှတစ်ဆင့် ၀ ယ်ယူမှုနောက်ကျသွားနိုင်သည်။
ဒါပေမဲ့ ငွေပေးချေရန်မိနစ်အနည်းငယ်ယူရန်အလွန်အရေးကြီးပါသလား။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအရေးကြီးသောအရာအဖြစ်မယူမှတ်ပါ။ သို့သော်ကျောင်းသားများကဲ့သို့သောအချို့လူများက၊ ဟုတ်တယ်၊ သူတို့ကဒီနည်းပညာနဲ့ Amazon Go စတိုးသစ်တွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးချလိမ့်မယ်။။ မျှော်လင့်အတူတူဖြစ်ပျက်အတူတူပါပဲ အမေဇုံပေါ်တွင် ebooks များဝယ်ယူ သို့မဟုတ်အက်ပလီကေးရှင်းများဝယ်ယူခြင်းနှင့်အတူ သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ကုမ္ပဏီများမှ » အမေဇုံကစာအုပ်ဆိုင်မှငွေရှင်းကောင်တာများကိုဖယ်ထုတ်မလား။
ယခုသင်သည် Orange Catalog မှ Kindle PaperWhite ကို ၀ ယ်နိုင်သည်